Magaalada Beijing ee caasimada Shiinaha oo ka furmay Madasha Iskaashiga Afrika Shiinaha… – Hagaag.com
Magaalada Beijing ee caasimada Shiinaha oo ka furmay Madasha Iskaashiga Afrika Shiinaha…
Magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha ayaa ka furmay Shirka Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee (FOCAC) oo ay sanadkan ka qeyb galayaan madaxda 53 dal oo Afrikaan ah.
Madaxweynaha Shiinaha ee dalkiisa uu martigelinayo shirka Xi Jinping ayaa furay shirka maanta oo Axad ah 3-September 2018-ka,waxaana ka qeyb galaya madaxweynayaasha dalalka Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto.
Wuxuu sheegay madaxweyne Xi Jinping, in Shiinaha iyo Afrika ay leeyihiin iskaashi dhinacyo badan leh, isagoona rajo wanaagsan ka muujiyay mira dhalka qodobada la isku afgarto ee ka soo baxa shirka.
“ Waannu ixtiraamnaa Afrika,Waannu jecel nahay Afrika,waanna taageernaa Afrika,” ayuu ku yiri madaxweyne Xi, Khudbaddiisa furitaanka shirka uu ka jeediyay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay furitaanka wada-hadallada heerka sare ee Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika (FOCAC) oo ay marti-gelinayso magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha.